उदयपुरको भुल्केमा कोरोनासँगै ठेउलाको संक्रमण – खबर खुराक
Home > कोरोना भाइरस अपडेटः > उदयपुरको भुल्केमा कोरोनासँगै ठेउलाको संक्रमण
१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०७:२२
काठमाडौं, १७ बैशाख । मुलुकभरका कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी एकै गाउँमा देखिएपछि चर्चामा आएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-३, भुल्केमा ठेउला (चिकन पक्स)को संक्रमण बढेको छ । हालसम्म ५ जनामा ठेउला देखिएको छ।
भुल्केमा २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको थियो। कोरोना परीक्षणका लागि गएको स्वास्थ्य टोलीले परीक्षणका क्रममा ठेउलाको संक्रमण बढेको जनाएको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सहप्राध्यापक डा. निरज बमका अनुसार ठेउला संक्रमित व्यक्ति सुतेको ओच्छयानमा सुत्दा तथा एवं लुगा लगाएको अवस्थामा स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि संक्रमणको डर हुन्छ। ‘ठेउला संक्रमित व्यक्तिसँगै बस्दा तथा अंकमाल गर्दा पनि संक्रमण हुने डर हुन्छ।’ डा. बमले भने। ठेउलाको जटिलताले निमोनिया, इन्सेफलाइटिस समेत गराउन सक्छ । ठेउलाको भ्याक्सिन नलिएका व्यक्तिलाई जोखिम बढि हुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०७७, बुधबार ०७:२२
Previous: थर्मल गनले सुलभलाई अदालत पुर्यायो, डेढ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको माग
Next: आजकाे मौषमः चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना